Mpanamboatra vata fampangatsiahana fiara - mpamatsy vata fampangatsiahana fiara China
10L Mini Car Refrigerator Car sy an-trano Ampiasao Cooler Portable sy Wifi Mini Mini
Ny Portable Car Elektronika 2-in-1 Cooling and Warming Refrigerator Fridge Storage 10L dia miasa ho toy ny kinova kely kokoa nefa mahomby amin'ny mpiara-miasa aminy lehibe kokoa ao an-dakozia. Izy io dia manana hatsiaka anatiny izay ambany kokoa noho ny maripana ivelany hatramin'ny 19-22 ° C, fa azonao atao ihany koa ny mamadika ny hafanana ary mahatratra 60 ° C ao anaty snap ho an'ireo sakafo ilaina sakafo izay maniry faritra mafana kokoa - izany rehetra izany dia amin'ny fampiononana anao fiara.
Model No: M-K10
Dimy ivelany: W288 x D251x H342 mm Dimy
anatiny: W164x D180 x H276 mm
GW / NW: 3.9 / 3.6 kg
22L Chiller an'ny Refrigerator mora vidy ao an-trano sy vata fampangatsiahana mafana ho an'ny dia
Trano, asa, sekoly, fitobiana, fitsangantsanganana, vodilanitra, lava-bato ao an-trano, ao anaty fiara, ao anaty sambo, RV, saika na aiza na aiza!
Model No: M-K22
ivelany: W290 x D382x H422 mm Dimy
anatiny: W230x D230 x H345 mm
GW / NW: 6.8 / 6.5 kg
9L Mini vata fampangatsiahana ho an'ny vata fampangatsiahana azo entina fotsy
Miaraka amina endrika kanto mifanentana tsara amin'ny haingon-trano ao amin'ny efitranonao, mifangaro tanteraka amin'ny kojakoja hafa. Izy io dia fanampin-javatra tonga lafatra amin'ny trano sy birao ary koa tsara ho an'ny mivoaka sy momba ny lasy na fitsangatsanganana. Namboarina tamin'ny fitaovana matanjaka sy maharitra ny sakafo, ny vata fampangatsiahana dia natao haharitra ary ho tsara tarehy miaraka.
Model No: M-K9A
ivelany: W373 x D191x H284 mm Dimy
anatiny: W25x D150 x H237 mm
GW / NW: 3.5 / 3.2 kg
18L Electric Compressor Cooler fridge Freezer Refrigerator ho an'ny dia
Ny vata fampangatsiahana kely dia maivana ary mora entina. Ny fisehoany sy ny endriny tsara tarehy, ny asany feno dia hitondra anao fahatsapana fampiononana, indrindra aorian'ny fiasanao mafy, ny fisotroana zava-pisotro mangatsiaka dia hanamaivana ny havizanana.
Model No: M-KM18
ivelany: W580 x D310x H320 mm Dimy
anatiny: W345x D245 x H200 mm
GW / NW: 11.8 / 11.5 kg
TOSIKARATRA: 220v / 12v
Isan'ny refrigeration: -20-10 ℃
Fampangatsiahana elektronika azo entina sy vata fampangatsiahana fiara 6L
Ity modely ity dia mety amin'ny fiara isan-karazany. Azo apetraka eo amin'ny seza aloha sy aoriana izy io ho toy ny tànana. Mila zava-pisotro azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra.
Model No: M-K6
ivelany: W270 x D230x H340 mm Dimy
anatiny: W155x D155 x H255 mm
GW / NW: 3.1 / 2.8 kg
Mini Home 4L Mini vata fampangatsiahana ho an'ny vata fampangatsiahana fiara fitateram-bahoaka
Ny vata fampangatsiahana fiara Mini Portable dia mety tsara amin'ny fitsangantsanganana, birao na maro hafa. Izy io dia mahatonga ny sakafo sy zava-pisotro ho vaovao na hatsiaka. Azonao atao ny mametraka azy ny mari-pana mba hahafahan'izy ireo mahafeno ny tena takinao. Ity karazana ity dia vata fampangatsiahana fiara semiconductor, ary ny fototr'izany dia ny miankina amin'ny vata fampangatsiahana elektronika. Ny vata fampangatsiahana fiara dia sady mangatsiaka no tsy voatery hanafanana.
Model No: M-K4
ivelany: W250 x D203x H280 mm Dimy
anatiny: W137x D140 x H203 mm
GW / NW: 2.5 / 2.2 kg
Hafanàm-po an Key Safe Box , Small tondro Safe , Electronic Office Safe Box , manasa-Ny Mpitarika Mini Bar Fa Hotel Room , Small Size Hotel Safes Ary Boxes Safe petra-bola , tantera-drano Cash Box , trano rehetra Products